အပြစ်မရှိတဲ့လူငယ်ကို လက်ထိပ်ခတ် ဖမ်းပြီး လူပုံအလယ် ထိုးလိုက်သေးတဲ့ ရဲနဲ့ သူတင်တဲ့ စတေးတပ် - Lucky9
Homepage / ကြားသိရသမျှ / အပြစ်မရှိတဲ့လူငယ်ကို လက်ထိပ်ခတ် ဖမ်းပြီး လူပုံအလယ် ထိုးလိုက်သေးတဲ့ ရဲနဲ့ သူတင်တဲ့ စတေးတပ်
အပြစ်မရှိတဲ့လူငယ်ကို လက်ထိပ်ခတ် ဖမ်းပြီး လူပုံအလယ် ထိုးလိုက်သေးတဲ့ ရဲနဲ့ သူတင်တဲ့ စတေးတပ်
တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အနေနဲ့ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို ခင်ဗျား သင်ယူလေ့လာခဲ့ဖူးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လိုက်နာစောင့်ထိန်းရကောင်းမှန်းတော့ သိပုံမရဘူး …
သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှု အားကောင်းမြန်ဆန်နေတဲ့ ခေတ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာတောင် ဒီလိုကျူးလွန်ရဲတာ ခင်ဗျားရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇကိုက ဆိုးသွမ်းတာကြောင့်လား? အရင့်အရင် မှုခင်းတွေမှာလည်း ခင်ဗျားဒီလိုပဲ ကျူးလွန်နေကျပဲလား?
ပညာတတ်ဆိုတဲ့ အလွှာကိုပါ စော်ကားတယ်။ခင်ဗျား စော်ကားခဲ့တဲ့သူက အတတ်ပညာအားဖြင့်လည်း B.E. (Civil) ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကို ရရှိထားတဲ့သူ။ အသိပညာအားဖြင့်လည်း မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပေါင်းအသင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမပေးတဲ့၊ သူ့အနုပညာနဲ့ လောကကို အလှဆင်နေတဲ့၊ အားလုံးက ချစ်ခင်ကြတဲ့ အနုပညာသမား။ခင်ဗျားရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ကျဆင်းစေပါတယ်။
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကိုရော ခင်ဗျား ဘယ်လိုလက်ခံထားပါသလဲ? အားပါးတရ စော်ကားထားပြီး အကောင့်ပါ ဖျက်ပြေးတာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟုတ်ပါသလား?တပ်ဖွဲ့ကနေ ရဲပြေးအဖြစ် မပြေးလောက်သေးဘူးလို့တော့ ယူဆပါတယ်။ ယောက်ျားစစ်တယ် ဆိုရင်ပေါ့။ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။
တပျဖှဲ့ဝငျတဈဦး အနနေဲ့ လိုကျနာစောငျ့ထိနျးရမယျ့ ကငျြ့ဝတျတှကေို ခငျဗြား သငျယူလလေ့ာခဲ့ဖူးမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ လိုကျနာစောငျ့ထိနျးရကောငျးမှနျးတော့ သိပုံမရဘူး …
သတငျးအခကျြအလကျစီးဆငျးမှု အားကောငျးမွနျဆနျနတေဲ့ ခတျေကာလအတှငျး အမြားပွညျသူမွငျကှငျးမှာတောငျ ဒီလိုကြူးလှနျရဲတာ ခငျဗြားရဲ့ ပငျကိုယျဗီဇကိုက ဆိုးသှမျးတာကွောငျ့လား? အရငျ့အရငျ မှုခငျးတှမှောလညျး ခငျဗြားဒီလိုပဲ ကြူးလှနျနကေပြဲလား?
ပညာတတျဆိုတဲ့ အလှာကိုပါ စျောကားတယျ။ခငျဗြား စျောကားခဲ့တဲ့သူက အတတျပညာအားဖွငျ့လညျး B.E. (Civil) ဆိုတဲ့ဘှဲ့ကို ရရှိထားတဲ့သူ။ အသိပညာအားဖွငျ့လညျး မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ပတျဝနျးကငျြ အပေါငျးအသငျး ဘယျသူ့ကိုမှ ဒုက်ခမပေးတဲ့၊ သူ့အနုပညာနဲ့ လောကကို အလှဆငျနတေဲ့၊ အားလုံးက ခဈြခငျကွတဲ့ အနုပညာသမား။ခငျဗြားရဲ့ လုပျရပျတှကေ တပျဖှဲ့ရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကိုပါ ကဆြငျးစပေါတယျ။
တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှု ဆိုတဲ့ စကားရပျကိုရော ခငျဗြား ဘယျလိုလကျခံထားပါသလဲ? အားပါးတရ စျောကားထားပွီး အကောငျ့ပါ ဖကျြပွေးတာ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ လုပျရပျဟုတျပါသလား?တပျဖှဲ့ကနေ ရဲပွေးအဖွဈ မပွေးလောကျသေးဘူးလို့တော့ ယူဆပါတယျ။ ယောကျြားစဈတယျ ဆိုရငျပေါ့။ ရငျဆိုငျဖို့ အသငျ့ပွငျဆငျထားပါ။
ကျူးကျော်တဲမှသည် နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်ခဲ့သည့် ညီမငယ်လေး
Previous post ရဲကိုကိုများရဲ့ စောက်တလွဲလုပ်ရပ်တွေအတွက် တာဝန်ယူဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
Next post ဖြိုးပြည့်စုံတို့ကို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲတယ်ဆိုပြီး အဖမ်းခံရအောင် ရဲကိုသတင်းပေးချောက်ချတဲ့သူ